बजार Archives - jagritikhabar.com
काठमाडौं । के तपाई जग्गा किन्नका लागि साथीभाइलाई सोधखोजमा लगाइरहनु भएको छ ? अर्थात तपाईले जग्गा किन्न सोचेको जिल्लामा कति भाऊ पर्ला भनेर सोंचेर बसिरहनु भएको त छैन ? अब तपाईले साथीभाइलाई जग्गा खोज्न र जग्गाको भाउ बुझ्न लगाउने भन्दा पनि सरकारले कुन जिल्लाको...
२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली बजारमा २४ लाख मूल्य पर्ने केटीएम ड्युक ७९० आउने भएको छ । नेपालको लागि केटीएम बाइकको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनीले आज अर्थात सोमबारदेखि बुकिङ खुल्ला गरेको हो । बीएस ४ इन्जिनयुक्त यो बाइकमा ७९९ सीसीको प्यारालल...
१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । आईओसीले बुधबार पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ २१ पैसा बढेको छ । त्यसैगरी, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ९८ पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ ।...
साउदी रियल ३३.१७ पुग्यो, मलेसियन रिन्गेट कति र अरुदेशको मुद्रा हेर्नुहोस !
१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी एक डलरको खरिद दर १२३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १२४ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। यस्तै युरो एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ५९...
काठमाडौं । शुक्रबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १२१ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको छ। युरोपियन युरो एकको खरिददर भने १३२ रुपैयाँ १२ पैसामा कारोबार भइरहेको छ। यसको बिक्रीदर १३२ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार आज अष्ट्रेलियन...
कति छ आजको मलेसियन रिंगिट ? यस्तो छ अन्य देशको मुद्राको विनिमय दर
२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १२२ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम गरेको छ । युरोपियन युरो एकको खरिद...
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मलेसियन एसयूभी प्रोटोन एक्स५० को बुकिङ खुला गरिएको छ । आगामी मार्च २३ मा लन्च गर्ने योजना भएको यो गाडीमा नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गर्न सकिने धेरै फरक खालका फिचर उपलब्ध छन् । प्रोटोन एक्स५० मा एडीएएस अर्थात एड्भान्स्ड ड्राइभर...